AKHRISO: Taariikhda Madaxweynaha Cusub Ee La Doortyay Mudane Farmaajo – Puntland Voice
February 8, 2017 5:34 pm Views: 88
Maxamed Cabdulaahi Maxamed oo ku magac dheer Maxamed Farmaajo waxa uu ahaa Ra’iisul wasaarahaii hore ee dowladii kumeelgaarka Soomaaliya.
Maxamed farmaajo waxaa barlamaankii DFKMG ansixisay taariikhda marka ee eheed 31 Oktoobar 2010. waxa uuna xilka iska casilay taariikhda marka ee eheed 19 Juun 2011.
Is casilaadiisa waxay timid markii madaxweyne shiikh shariif axmed iyo gudoomiyaha barlamaanka shariif xassan ee ku saxiixdeen dalka Yugandha in ee awooda qeebsadaan isla markaas neh xilka laga qaado mr farmaajo.
Dalka Yugandha ayaa lagu qabtay shir looga hadlaayay Siyaasadda soomaaliya, si loo xaliyo khilaafaadka ka dhaxeeyo mas’uuliyiinta Dawladda kmg.taariikhda marka ee eheed 10 Juun 2011 ayaa dalka yugandha looga dhawaaqay in ee xukumada farmaajo isku casisho mudo 30 maalmood gudahood.
Waqtigaas kadib waxaa dhacay mudaaharaadyo balaaran oo looga soo horjeedo labada shariif isla markaas neh lagu taageeraayay mr farmaajo.Banaanbaxyadaas kadib mr farmaajo waxoo go’aansaday in oo xilka sii haayo ilaa inta ee barlamaanka xilka ka qaadayaan.Laakiin wee u suurto geli weysay in oo sii joogo waxoona xilka iska dhiibay 19 juun 2011.
Farmaajo waxa uu dhashtay sanadka marka oo ahaa 1962, waxoo ku dhashtay caasimadda Muqdisho. Waxoo ahaa nin somali mareykan ah oo ku noolaa dalka mareykanka waqti aad u dheer.
Dowladii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre waxee farmaajo mar u dooratay danjiraha safarada ee somalia ku lahaan jirtay magaalo madaxda Washington ee dalka Maraykanka, sanadka marka oo u dhaxeeyay 1985 ilaa 1988.
Raiisul wasaaraha cusub markii la ansixiyay waxoo shacabka soomaaliyeed ugu balan qaaday in oo dalka dhibaatada ka saaraayo, isla markaas neh dibudhis iyo isbedel ween oo ku sameenaayo dalka.
Raiisul wasaaraha waxoo magacaabay xukumad yar oo kooban, oo badankooda ah somalida qurbo joogta aha. Xukumada oo soo magacaabay waxee ka koobanyihiin 18 wasiiradood, waa isbedelka ugu horeeyo ee DFKMG, waa xukumada ugu yar ee taariikhda DFKMG.
waxaa uu xilka kadagay 16/08/2012 waxaa qabaty xilka raisal wasaare nimo dabadii cabdi wali cali gaas famaajo waxaa lgu yaqaanaa cadalada iyo kahor marinta wax walba arimaha Dawladda waxaa uu farmaajo ku labtay Muqdisho09/08/2012 markuu kamaqanaa modo sanad ah asagaa oo musharax u ah xisbiga tayo
Magacyada wasiiradii uu Farmaajo magacaabay
1.fahad cali xasan , wuxuu ahaa Raiisul wasaare ku xigeen, ahna Wasiirka arrimaha dibedda.
2.Cabdixakiim Maxamuud Xaaji Fiqi, wuxuu ahaa Raiisul Wasaare ku xigeen, ahna Wasiirka arrimaha gaashaandhiga.
3.maxamed cumar xabeeb, wuxuu ahaa Raiisul Wasaare ku xigeen ahna Wasiirka Qorsheynta iyo iskaashiga Caalamiga.
4.Cabdullahi Abyan Nuur, wuxuu ahaa Wasiirka garooska arrimaha diinta iyo awqaafta.
5.Cabdishakuur Shiikh Xassan Faarax‎, wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka.
6.Xuseen Cabdi Xalane, wuxuu ahaa Wasiirka maaliyadda iyo Lacagta.
7.cabdiraxiin cumar abiikar, wuxuu ahaa Wasiirka Haweenka iyo Arrimaha qoyska.
8.Yusuf Macalin Amiin Baadiyow, wuxuu ahaa Wasiirka Beeraha iyo xanaanada xoolaha.
9.Dr Aadan Xaaji Ibraahim Daaud wuxuu ahaa Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka Bulshada.
10.Cabdikariim Xasan Jaamac, wuxuu ahaa Wasiirka Warfaafinta iyo Boostada iyo Isgaarsiinta.
11.Cabdinuur Macalin Maxamuud, wuxuu ahaa Wasiirka arrimaha bulshada, shaqada iyo horumarinta shaqaalaha.
12.Maxamed Macalin Xasan, wuxuu ahaa Wasiirka Kaluumeysiga, Beyada iyo kheyraadka badda.
13.Axmed Cabdiraxmaan Abaade, wuxuu ahaa Wasiirka dekedaha gaadiidka badda cirka iyo dhulka.
14.Maxamuud Maxamed Boonoow, wuxuu ahaa Wasiirka Dastuurka Federalka iyo Dib u heshiisiinta.
15.Cabdirashiid Khaliif Xaashi, wuxuu ahaa Wasiirka Howlaha guud iyo dib u dhiska.
16.Cabdirisaaq Shiikh Muxudiin,wuxuu ahaa Wasiirka Macdanta, Biyaha, Tamarta iyo Shidaalka.
17.Cabdinuur Shiikh Maxamed, wuxuu ahaa Wasiirka Waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare
18.Maxamuud Cabdi Ibraahim, wuxuu ahaa Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha.